N'ogbe Aluminium Dual Handle Hand Truck With 2 Wheels Manufacturers and Suppliers | ABC
Aluminom Dual Aka Hand Truck With 2 Wheels
HT9913 bụ aluminium D aka ụgbọala. Mkpokọta size (H × W × D) bụ 60 ”× 20-1 / 2” × 18-1 / 2 ”, na apịaji size bụ 18” × 7- 1/2 ”, ya net arọ bụ 21lbs. ọkọlọtọ 2-wheel trolley bụ nnọọ adabara katọn, arọ ígwè na ngwá ụlọ ga-achọ a ọkachamara trolley ka HT9913.
HT9913 bụ aluminium D aka ụgbọala. Mkpokọta size (H × W × D) bụ 60 ”× 20-1 / 2” × 18-1 / 2 ”, na apịaji size bụ 18” × 7- 1/2 ”, ya net arọ bụ 21lbs. Ọkọlọtọ 2-wherol dị mma maka katọn, igwe dị arọ na arịa ụlọ ga-achọ trolley ọkachamara dịka HT9913.Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịghọ aghụghọ iji jiri nnukwu steepụ mee ihe, ha dị oke mma maka ịbugharị ihe ndị dị arọ elu na ala Trolleys anaghị adịkarị mma maka ihe dị arọ karịa 600 pound, ọ bụ ezie na welded frame trolleys nwere ike iburu ibu karịa mgbe ụfọdụ. ihe, trolley nwekwara ike isi ike iji.
1. Nrụ ọrụ dị arọ na ike na ogologo oge.
2. HT9913 ikike ikike: 600lbs.This larịị nke ibu ikike dị mma nke ukwuu na aka gwongworo.
3. The ergonomically e mere roba-ọbọp aka bụ karịsịa ala iji.
4. Onwunye na 10 ”pneumatic wiil, ala Rolling eguzogide.
5. crosskwụ mgbatị ato dị n’etiti ụgbọala na-ejide aka nwere ike igbochi obere ngwongwo ịda site na etiti.
6. Enweghi ike apịa ya maka nchekwa, o were ohere karịa, ma anyị anaghị akwado ya maka ezinụlọ.
Abctools na - arụpụta ma na - ere nnukwu ụgbọ ala dị iche iche, mana ọ bụghị naanị na ị na - erere gị ngwaahịa, kamakwa anyị na - enye gị usoro edozi zuru oke. Anyị na-enye akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka ngwa gị, nke dị mkpa iji mezue ọrụ mkpanaka ahụ n'enweghị nsogbu na nke ọma. Cksgbọala anyị na ngwa anyị bụ ngwaọrụ dị mkpa maka njikwa ihe. Ndị anyị na-agagharị agagharị na-echekwa ihe ndị ahụ nke ọma n'oge njem, si otú a na-ebelata nchịkọta na nchịkọta nke ihe.
Pịa na njikọ iji kpọtụrụ anyị ozugbo, ndị ahịa m hụrụ n'anya.info@abctoolsmfg.com
Nke gara aga: Kemeghi Boltless stacking Work Bench Metal Steel Shelving Nchekwa ogbe Unit
Osote: Vietnam Nrụgide oru Elu Garage Nchekwa System ogbe Metal Iji Boltless Rivet Shelving N'ihi Home
600 Lb Aka ụgbọala
Aluminom Aka Aka
Truckgbọala aka abụọ
ụgbọala na-adịgide adịgide
Aluminom Flow Back Aka Hand Trọ na Abụọ ...
Kọmpat foldable Aluminium Hand Trọ na teles ...
Zụta factory price ígwè eruba azụ ahụ n'aka t ...
2 na 1 Convertible Aluminom Platform / Aka Stora ...
600lbs. Aluminium D-aka Hand Trọks na akpa ume ...
New imewe adaba ọnụ ala ịgbado ọkụ pallet Tro ...
Ime ụlọ ime ụlọ Obere Nchekwa Obere Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Shelf maka ulo Ogbe shelf Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa